के दिपिका पादुकोण जेल जान्छिन् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
के दिपिका पादुकोण जेल जान्छिन् ?
सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको केस लागुऔषध मुद्दामा प्रवेश गरेसँगै बलिउडका कलाकारहरुमाथि एनसीबीले निशाना बनाइरहेको छ । लागुऔषध मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको एनसीबीले रिया चक्रवर्तीबाट जया शाहा सम्म पुगेर सोधपुछ गरिरहेको छ । जया शाहासँग सोधपु्छ एनसीबीले गरेपछि दिपिका पादुकोणको म्यानेजर करिश्मा प्रकाशसम्म पुगेको छ ।
वास्तवमा दिपिकाको म्यानेजर करिश्मा प्रकाश ‘क्वान’ नाम को सेलिब्रिटी मैनेजमेन्ट कम्पनीमा काम गर्छिन् । यस कम्पनीले ४० भन्दा धेरै बलिउड कलाकारहरुलाई टैलेन्ट म्यानेजर उपलब्ध गराएको थियो । करिश्मा प्रकाशसँग एनसीबीले छानबिन गरिरहेको छ । उनले सोधपुछको क्रममा दिपिका पादुकोणको नाम जोडिएको छ ।
दिपिका पादुकोण र उनको म्यानेजर करिश्मा प्रकाशबीचमा भएको कुराकानीको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । उक्त च्याटमा दिपिकाको नाम ‘डि’ र करिश्माको नाम ‘के’ कोडको प्रयोग गरिएको छ । दिपिका र करिश्माबीचको ड्रग्स च्याट निकै भाइरल भएको छ । अब एनसीबीले दिपिकालाई सोधपुछ गर्न सक्ने संभावना छ । अब दिपिका २५ सेप्टेम्बरमा एनसीबी समक्ष पेश हुन सक्नेछिन् । यस विषयलाई लिएर दिपिकाको विरुद्ध केहि गम्भीर आरोपसहित मुद्दा पर्न सक्छ ।
भारतमा ड्रग्सको खरिदको विषयमा कडा कानुन र सजायहरु तोकिएका छन् । सामान्य लागुऔषध केसमा पनि कसैले कम मात्रामा प्रतिबन्धित ड्रग्स आफुसँग राखेमा १ वर्षको सजाय र १० हजार जरिवाना हुन्छ ।
नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसीबी)ले दिपिकाको साथै सारा अलि खान, श्रद्धा कपुर र रकुल प्रीत सिंहलाई लागुऔषध मुद्दामा सोधपु्छ गर्न बोलाएको छ । दिपिकाको म्यानेजर करिश्मालाई मंगलबार बोलाएपनि बिरामी भएकोले करिश्मा उपस्थित हुन सकिनन् ।
सेटमै बेहोस भएका हाँस्यकलाकार केसीको निधन
काठमाडौं, ३ असोज । हाँस्यकलाकार रमेश केसीको सुटिङमा सेटमै निधन भएको छ ।उनको आज बिहान
राजमाथि १५ सय लामो आरोपपत्र दायरपछि शिल्पाले यस्तो पोस्ट गरिन्
एजेन्सी, ३ असोज । बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको पति राज कुन्द्रा अश्लिल फिल्म बनाउने र
काठमाडौं, असोज ३ । हाँस्य रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन सिजन २ को विजेता भरतमणि पौडेलले
चर्चित टेलिश्रृंखला ‘मेरी बास्सै’का निर्देशक दमन रुपाखेतीसँगको रमाइलो कुराकानी
बलिउड अभिनेता सोनु सुदमाथि कर छलेको आरोप
एजेन्सी, २ असोज। बलिउड अभिनेता सोनु सुदले २० करोड भारुभन्दा बढी कर छलेको भारतको आयकर
‘कमेडी च्याम्पियन सिजन २’ को फाइनल आज, कसले जित्ला २५ लाख नगद र कार ?
काठमाडौं, २ असोज । नेपालको एकमात्र कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन २’ को फाइनल